October 10, 2020 - Achawlaymyar
ကိုဗဈကာလ ဆှမျးအခကျအခဲကွောငျ့ ယာဂုဆှမျးသာ ဘုဉျးပေးနရေတဲ့ သံဃာတျောအပါး (၁၀၀၀) အတှကျ လှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
October 10, 2020 by Achawlaymyar
ခိုင်နှင်းဝေကတော့ Covid ကာလအတွင်းမှာလည်း ပရဟိတအလုပ်တွေ ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူမရဲ့ ရင်သွေးလေးတွေရဲ့ ဂေဟာမှာလည်း ကလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလဲ ခိုင်နှင်းဝေက သံဃာတော်အပါး (၁၀၀၀)လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးပြောကြလာပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက “ဒီနေ့ သံဃာတော်အပါး (၁၀၀၀)လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်..ဆွမ်းစားချိန်ရောက်သွားတဲ့အခါ ယာဂုဆွမ်းသာ ဘုဉ်းပေးနေရပါတယ်လို့ ကျမဆီ အကူအညီတောင်းခံလာတာတွေ့တော့ တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်… ဆရာတော်တွေ ဆွမ်းခံမကြွရတော့တဲ့အတွက် တော်တော် အခက်ခဲဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်.. ကျောင်းကလေးကလဲ ချောင်ကျတော့ အလှူရှင်တွေ အမြဲ ကျော်သွားခံရတဲ့ကျောင်းလေးလဲဖြစ်တော့ တော်တော်လေးဒုက္ခ ရောက်နေရှာပါတယ်.မလှူခင်အကြားနဲ့တင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတဲ့ ကျမ ယခုလိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့လိုက်ရတော့ ယနေ့လှူလိုက်ရတဲ့ အလှူမြတ်သောအလှူဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ကျမနှင့်အတူ အလှူရှင်များအားလုံး ဝမ်းမြောက်စွာသာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေရှင် ယနေ့လှူတဲ့ သံဃာတွေထဲ ဒလမြို့မှ သံဃာတော်တွေလဲပါတာမို့ ဆိပ်ကမ်းအထိသွားရောက် လှူပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်..🙏🏼🙏🏼🙏🏼” … Read more
နှလုံးရောဂါမဖြစ်ခင် တစ်လအလိုမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က သတိပေးမယ့် အချက် (၈) ချက် (ရုပ်သံ)
ကွိုတငျ ကာကှယျခွငျးက ကုသခွငျးထကျ ပိုကောငျးပါတယျ။ ဘယျရောဂါအတှကျမဆို ရောဂါလက်ခဏာ မပွခငျ ကာကှယျထားတာ ကောငျးပါတယျ။ နှလုံးရောဂါရဲ့ အရေးကွီးတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာရပျတှကေ တဈလ ကွိုတငျပျေါပေါကျ တတျပါတယျ။ အရမျးကွီးတော့ မလနျ့သှားပါနဲ့။ ဒါပမေယျ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ သတိရှိတာက ဘယျတော့မှ ဆိုးကြိုးမဖွဈပါဘူး။ 1. ရငျဘတျအောငျ့ခွငျး ရငျဘတျအောငျ့ခွငျး အမြိုးမြိုးကို အမြိုးသားရော အမြိုးသမီးမှာပါ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ခံစားရပါတယျ။ အမြိုးသားတှမှော ရငျဘတျအောငျ့ခွငျးက နှလုံးရောဂါဖွဈနိုငျတဲ့ အရေးကွီးဆုံးလက်ခဏာရပျဖွဈပွီး အမှတျတမဲ့မနသေငျ့ပါဘူး။ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ 30 ရာခိုငျနှုနျးလောကျပဲ ရငျဘတျအောငျ့တာကို ခံစားရပါတယျ။ ရငျဘတျအောငျ့ခွငျးဟာ လကျမောငျးတဈဖကျ၊ သို့မဟုတျ လကျမောငျးနှဈဖကျ (အထူးသဖွငျ့ ဘယျဘကျ)၊ အောကျမေးရိုး၊ လညျပငျး၊ ပုခုံးနဲ့ အစာအိမျအထိ မသကျမသာဖွဈစပေါတယျ။ ရငျဘတျအောငျခွငျးက အမွဲတမျးလညျး ဖွဈနိုငျသလို ယာယီလညျး … Read more
တကယျခဈြတဲ့လူနဲ့တှတေဲ့အခါကြ ဖွဈလာတတျတဲ့ မိနျးကလးတို့ရဲ့ ပွောငျးလဲမှုမြား….
FA မိန်းကလေးတွေရဲ့ သူများနဲ့ မတူတဲ့ အားကျစရာ အချက်လေးတွေ….
FA မိန်းကလေးတွေရဲ့ သူများနဲ့ မတူတဲ့ အားကျစရာ အချက်လေးတွေ…. တစ်ကောင်တည်း ဒါပေမယ့် ခြင်္သေ ဆိုသလိုပါပဲ။ တစ်ယောက်တည်း နေနေကျ ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေကလည်း တကယ့်ကို ထူးခြားတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ FA လို့ နာမည်ရနေပေ မယ့်လည်း သူတို့ကတော့ သူမတူတဲ့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ကောင်းကွက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြ ပါတယ်။ သူတို့မှာ ရှိတဲ့ အခုလို အချက်တွေကို သေချာ သတိထားမိရင် သူက တကယ့်ကို ကံကောင်းပြီး အားကျစရာ ကောင်းတဲ့သူ ဖြစ်နေတာပါနော်။ (၁) ကိုယ့်ဘာသာ တွေးတောနိုင်တယ် သူများကို အားကိုးစရာ မလိုတာ သူတို့တွေပါပဲ။ ဘာကို လုပ်သင့်တယ် မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာတွေကို သေချာ တွေးတောနိုင်လို့ ဘဝမှာ သူတို့က တစ်ကိုယ်တည်း ရပ်တည်ပြီး … Read more
အသည်းကွဲပြီးမှ မိန်းကလေးတွေ ပိုလှလာတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား အသည်းကွဲသွားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ပိုပြီးလှလာတတ်တယ်တဲ့ တကယ်တော့ ပိုပြီးလှလာတာမဟုတ်ဘူး… အရင်ကတည်းလှပြီးသားကို အခုမှ ရုပ်ထွက်လာတာပါ သူနဲ့ လမ်းမခွဲခင်တုန်းက ဆံပင်အရှည်လေးထားပါဆိုတဲ့ စကားလုံးလှလှလေးတွေကြောင့် ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဆံပင်အတိုလေးတွေနဲ့ မညှပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ဆံပင်ရှည်ကြီးနဲ့ အသက်ကလေး ငယ်ငယ်နဲ့ ရုပ်ရင့်သွားသလိုလို ဖြစ်နေတာပါ … ။ သူနဲ့ လမ်းမခွဲခင်တုန်းက ဟိုလိုမဝတ်ပါနဲ့လား ဒီလိုမဝတ်ပါနဲ့ ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကြားမှာ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် အဝတ်အစားလေးတွေ ရွေးပြီး မဝယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး သူနဲ့ စိတ်တိုင်းကျမယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေပဲ ကျွန်မ ဝတ်ခဲ့တာ သူနဲ့ လမ်းမခွဲခင်တုန်းက အလှတွေ အရမ်းမပြင်ပါနဲ့လားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်သံလို့ ထင်ခဲ့တဲ့ ချုပ်ခြယ်မှုတွေအောက်မှာ ကျွန်မ အချိန်ပေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မပြင်ဆင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး …. ။ သူသဘောကျသလို ရှိုးမများပဲ နေခဲ့မိတာ … Read more
ချစ်သူအပေါ် အရမ်းကိုစိတ်နှစ်ပြီး အရူးအမူးချစ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဆိုးကျိုး(၅)ခု…
ဒီဇိုငျးပညာရှငျမြားရဲ့ ရယျစရာကောငျးတဲ့ တီထှငျဖနျတီးမှုမြား – ဓာတျပုံ(၂၀)
ယနခေ့တျေမှာတော့ ဒီဇိုငျးပညာရှငျမြားဟာ အမြားနဲ့မတူဘဲ ဆနျးသဈတီထှငျမှုမြား ပွုလုပျလာကွပါတယျ။ Professional ဒီဇိုငျးပညာရှငျမြားရဲ့လကျရာမြားဟာ လူကွိုကျမြားကွပမေယျ့လညျး အခြို့သောဒီဇိုငျးပညာရှငျမြားရဲ့ ဆနျးသဈလှနျးတဲ့လကျရာမြားဟာ ရယျစရာကောငျးနခေဲ့ပါတယျ။ ဒီဇိုငျးပညာရှငျမြားရဲ့ဖနျတီးမှုမြားကို ကဲ့ရဲ့လိုစိတျမရှိဘဲ မိတျဆှတေို့ရဲ့ဘဝအမောတှေ ပွပြေောကျစဖေို့အတှကျသာရညျရှယျပွီး အခုတဈခေါကျမှာတော့ ဆနျးသဈလှနျးတဲ့ ဒီဇိုငျးနာမြားရဲ့ရယျစရာကောငျးတဲ့ ဓာတျပုံအခြို့ကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ ၁။ ငှရှေငျးကောငျတာ ၂။ ဘောငျးဘီအလနျး ၃။ မွှပေုံသဏ်ဌာနျ ခေါငျးစညျး ၄။ ဆေးလိပျပုံစံဆံပငျ ၅။ FA မြားအတှကျ ဖုနျးကာဗာ ၆။ ဖိနပျပုံစံကြောပိုးအိတျ ၇။ မွငျးပုံစံထိုငျခုံ ၈။ နှာရညျယိုနတေဲ့ပုံစံခှကျ ၉။ ဒီပူပေါငျးရဲ့ လမှေုတျရမယျ့နရောက သိပျတော့အဆငျမပွဘေူး ၁၀။ ဘယျလိုစားရမလဲတော့မသိဘူး ၁၁။ အသားပျေါနတေဲ့ပုံစံ ဂငျြးဘောငျးဘီ ၁၂။ စားရတာတော့ သိပျအားမရလောကျဘူး ၁၃။ ဖိနပျစီးထားတဲ့ပုံစံခွအေိတျ ၁၄။ လကျသညျးအလှပုံစံအဆနျး … Read more